Hitman: mutambo wevhidhiyo wakakurumbira une zvemukati zvitsva zvakagadzirirwa | Linux Vakapindwa muropa
Mutambo mutsva hausi kuuya izvozvi, asi kune avo vauwana Hitman uye kuda zvimwe zvemukati mune mhanza. Vagadziri vemusoro uyu vakazivisa kuti Gumiguru 24 richava zuva rakakosha pakarenda yavo nezvimwe zvirimo zvinouya kuti vatambi vafare. Semazuva ese, isu tatoona nhau dzemwedzi uno waGumiguru uye chiziviso chitsva chakaburitsa pachena kuti zvimwe zvirimo zviri kuuya, asi hausi mwaka wechipiri kuitira kuti varege kuodza moyo vateveri vemusoro uyu.
Iwe unotoziva kuti iwe unogona kuiwana mune inozivikanwa Valve chitoro, chiutsi uye ndipo paunofanirwa kuziva kuti uone zvavanotiunzira nhau pazuva iro ravakatomaka karenda ravo rekuburitsa. Kana iwe uchida kuwana rumwe ruzivo nezve izvo zvichauya muna Gumiguru 13 uye zvakare zveiyo Gumiguru 24, unogona kubvunza iyo peji reprojekti repamutemo muchikamu chavaisanganisira chirongwa chekuburitsa kana nhau dzemwedzi uno. Kuti utore mutambo wevhidhiyo, unogona kuenda kune uyu link kupi kutenga uye kurodha pasi.
Kutenda kune yakanakisa Feral Interactive Isu tinayo zvakare yeLinux, saka zvichave zvinonakidza kuona kuti rino boka rekuvandudza rinoshandisa sei chigamba nezvitsva zvemukati uye zvigadziriso zvakare zveiyo penguin chikuva munguva pfupi. Iwe unotoziva kuti isu tine chikwereti kuwanda kwemazita makuru kuFeral studio izvo vashandisi veLinux vava nazvo uye izvo zvakatanga kuburitswa zveMicrosoft Windows kana mamwe mapuratifomu nevakagadziri vekutanga.
Ini ndinofunga hazvina kukodzera kutaura nezveiyo Hitman vhidhiyo mutambo, nekuti iri inozivikanwa zita uye haidi sumo, sekuziva kwako, kune mamwe mafirimu akavakirwa pairi. Uye kana usati uchimuziva, unofanira kuzviedzasezvo zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Hitman: mutambo wevhidhiyo wakakurumbira une zvemukati zvitsva zvakagadzirirwa
Librem 5 inowana mari yainoda
iPal: AvatarMind's humanoid robhoti iyo inogona kuve yakagadzirirwa nekuda kweROS uye Android